Ukuqeqesha | May 2022
Main > Ukuqeqesha
imigomo eyisisekelo yokuqeqesha
Izimiso zokuqeqesha eziyisisekelo - izimpendulo ezivamile
Yiziphi izimiso ezi-5 zokuqeqesha? Ukuze uthole okuphelele ekuqeqeshweni kwakho, udinga ukusebenzisa imigomo emihlanu ebalulekile yokucaciswa kokuqeqeshwa, ukuzenzela, ukulayishwa okuqhubekayo, ukuhlukahluka futhi wazi ukubuyela emuva.
ukuqeqeshwa kwabagibeli bamabhayisikili
Ukuqeqeshwa kwabagibeli bamabhayisikili abaPro - izixazululo ezintsha
Yikuphi ukuqeqeshwa okwenziwa ngabagibeli bamabhayisikili abaphambili? I-High-Intensity Interval Training (HIIT) iyithuluzi elisetshenziswa ngabasubathi abaqeqeshiwe nabasafufusa ngokufanayo ukuzuza kakhulu ekuqeqeshweni kwabo ngenkathi besebenzisa indlela yokuqeqesha ehlukanisiwe. Inhloso ukushada amaseshini we-HIIT ngezikhathi eziphansi zokuqeqeshwa isikhathi eside ukukhulisa ukuthuthuka kokusebenza kwakho.
ama-calories ashise ukuqeqeshwa kwesikhawu
Amakholori ashisa ukuqeqeshwa kwesikhawu - izixazululo ezihlala njalo
Kusha amakholori amangaki ukuqeqeshwa kwesikhawu? Emaminithini angamashumi amabili agcwele ale nqubo, umuntu angashisa phakathi kwama-calories ayi-9-13 ngemizuzu. Phakathi nengxenye yangempela ye-HIIT yokuzivocavoca, umuntu kungenzeka ukuthi ushisa kakhulu emigqeni yama-calories ayi-12-16 ngomzuzu.
peter sagan ukuqeqeshwa
UPeter sagan ukuqeqeshwa - izixazululo ezintsha
Uqeqesha uPeter Sagan amahora amangaki? USagan uqeqesha cishe amahora angama-19 ngesonto, ngaphezu kwanoma ngubani kithi ogibelayo ngaphandle uma sisekhempini lokuqeqesha noma sisendaweni yokuvakasha. Lokhu akunconyelwe umgibeli wamabhayisikili oyizimfundamakhwela, kepha ezinye izici zokuqeqeshwa kwakhe okuyisisekelo, ikakhulukazi indlela yakhe yezikhawu ingafundisa.
uhlelo lokuqeqeshwa kwamamayela ayishumi
Uhlelo lokuqeqeshwa kwamamayela ayishumi - izixazululo ezi-pragmatic
Kufanele uqeqeshe isikhathi esingakanani ukugijima imayela eli-10? Esimweni esinjalo kufanele uvumele okungenani izinyanga eziyisithupha ukuqeqesha umjaho wamamayela ayi-10. Isonto 1: NgoLwesibili: Gijimani imizuzu engama-30. Phinda lokhu futhi ngesonto ngezinsuku zokuphumula phakathi kosuku ngalunye lokuqeqeshwa. NgeSonto hamba umjaho oqhubekayo wamamayela ama-2 bese ubhala isikhathi sakho ekugcineni.
ukuqeqeshwa indawo emnandi
Ukuqeqeshwa kwendawo enhle - indlela yokubhekana nayo
Kuyini ukuqeqeshwa kwendawo enhle? Ukuqeqeshwa kwendawo emnandi inani elilinganisiwe lokuqina nevolumu okwandisa amandla omgudu womgijimi osebenzayo (FTP) futhi kuthuthukise ukukhuthazela. Phakathi kwale mikhakha abasubathi bazokhiqiza ama-Training Stress Scores amakhulu (TSS), bandise i-Chronic Training Load (CTL) futhi benyuse amandla ngasikhathi sinye.
izinhlelo zokuqeqeshwa kwabahluphekayo
Izinhlelo zokuqeqeshwa kweSufferfest - izixazululo ezisebenzayo
Ngabe ulwenza kanjani uhlelo lokuqeqesha iSufferfest? Khetha futhi Phatha Izinhlelo Zakho Zokuqeqesha Ngokuqondile Kuhlelo Lokusebenza Ukuze uqalise, ngena ngemvume kuhlelo lokusebenza, khetha isiyalo sakho okubandakanya umgwaqo, i-triathlon, i-cyclocross, i-gravel, i-XC MTB, ne-eSportsadd i-yoga yokuzikhethela, amandla noma ukuqina kwengqondo, bese ulandelela intuthuko yakho ngqo ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-SUF.
Ukuhamba ngebhayisikili ngamamayela angama-50 akukho ukuqeqeshwa
Ukuhamba ngebhayisikili ngamamayela angama-50 akukho ukuqeqeshwa - ukuthi ungabhekana kanjani nakho
Ukugibela ibhayisikili elingamamayela angu-50 kufanele kuthathe isikhathi esingakanani? cishe amahora amathathu nemizuzu engama-30
polar ukuqeqeshwa umthwalo
Umthwalo wokuqeqeshwa kwePolar - ireferensi ephelele
Uyini umthwalo wokuqeqesha wePolar?
amasonto ayisithupha uhlelo lokuqeqeshwa lwe-10k
Uhlelo lwamasonto ayisithupha lokuqeqeshwa ngo-10k - ungahlala kanjani
Ungakwazi ukuqeqesha i-10K emavikini angu-7? Ngoba, uma ungakwazi ukuqhuba i-5k ngenjabulo ngokunganqamuki futhi ubulokhu uqeqeshwa njalo okungenani amasonto ayisithupha, uzobe usesimeni esanele sokuqala ukusebenza uqonde ku-10k. Futhi, ngalolu hlelo olusebenzayo lokuqeqeshwa, uzokwazi ukusebenzisa i-10k PB ehloniphekile emasontweni ayisikhombisa nje, kuhle kangakanani lokho.
bukela ukuqeqeshwa kwesikhawu
Buka ukuqeqeshwa kwesikhawu - ukuthi ungakufinyelela kanjani
Ngabe i-Apple Watch ingakwenza ukuqeqeshwa kwesikhawu? Shiya ifoni yakho ekhaya. Sebenza nge-Apple Watch yakho kuphela. Izikhathi ezilindile zizolandela izinga lokushaya kwenhliziyo yakho, amakhalori, ibanga, ijubane, nomzila wokujima. Izexwayiso ze-Haptic thepha isihlakala sakho bese unikeza isexwayiso somsindo ezikhathini zokubalwa phansi.
Ukuqeqeshwa okungu-1 45 kwemarathon
Ukuqeqeshwa okungu-1 uhhafu wemarathon - imibuzo ejwayelekile
Yini i-Pace eyi-1 45 uhhafu wemarathon? 08:00 ngemayela
ukuqeqeshwa okuphezulu ngokweqile
Ukuqeqeshwa okuphezulu kakhulu - unganquma kanjani
Kuyini ukuqeqeshwa kweMax-OT?
imishini yokuqeqeshwa isikhawu
Isisetshenziswa semishini yokuqeqesha - izixazululo ezingaba khona
Imiphi imishini edingekayo ekuqeqesheni isikhawu? Isisetshenziswa Sokuqeqesha Esikhawu Kufanele futhi ucabangele ukusebenzisa izinsimbi zamahhala namabhande wokumelana ukwengeza ukuqeqeshwa kwamandla ezikhathini zakho zesikhawu futhi wandise amandla. Amabhande wokumelana awusizo ukusebenzisa eduze kwemilenze yakho, futhi izisindo zamahhala zilungele ukuzivocavoca umzimba. Zingasetshenziswa ngasikhathi sinye.
Uhlelo lokuqeqeshwa kwe-zwift
Uhlelo lokuqeqeshwa kweZwift - izixazululo ezihlala njalo
Ngabe izinhlelo zokuqeqesha iZwift zilungile? Yize iZwift ilungele ukuvele ugxumele kumqeqeshi nokugibela mahhala ukuzijabulisa, futhi kuyithuluzi lokuqeqesha elinamandla ngobuningi bokuzivocavoca kanye nezinhlelo zokuqeqesha ukukusiza uthathe imfanelo yakho uye ezingeni elilandelayo. Uma usuhlelile ukusethwa kwakho kweZwift, konke okudingeka ukwenze ukugxumela phambili uphinde unyathele.
Ukuqeqeshwa kwePlateau - izixazululo ezisebenzayo
Liyini ithafa lokuqeqesha? Liyini iThafa Lokuqeqesha? Lapho isetshenziswa ohlelweni lokuzivocavoca umzimba, ithafa elisentabeni libhekisela ekwehleni okungazelelwe nokwedlulele kwemiphumela ebonakalayo yokusebenza kwakho okuvamile. Lokhu kungazibonakalisa kuzo zombili amandla nokuqeqeshwa kwenhliziyo, futhi kukwehla kwesisindo.
ukuqeqeshwa kwamandla kwabagijimi dvd
Ukuqeqeshwa kwamandla kwabagijimi dvd - indlela yokuphatha
Yikuphi ukuqeqeshwa kwamandla okuhle kakhulu kwabagijimi?
Uhlelo lokuqeqeshwa kwecala lwesikhathi esingu-40k
Uhlelo lokuqeqeshwa kwezilingo zesikhathi esingu-40k - izimpendulo nemibuzo ejwayelekile
Ngingasithuthukisa kanjani isivinini sami sesivivinyo sesikhathi?
Ukuqeqeshwa kwezinsuku ezi-3
Ukuqeqeshwa kwezinsuku ezi-3 - izixazululo ezintsha
Ingabe izinsuku ezi-3 zanele ukuzilolonga? Ochwepheshe batusa ukuzivocavoca okungenani kathathu ngesonto ukuze ulondoloze impilo enhle. Abantu abaningi bakhetha ukuzivocavoca umzimba ngaphezu kwenani elinconyiwe lezinsuku, kepha abantu abamatasa akufanele bazizwe benecala lokuzivocavoca izinsuku ezintathu kuphela ngesonto.
uhlelo lokuqeqeshwa olungu-10k
Uhlelo lokuqeqeshwa oluphakathi no-10k - ungaxazulula kanjani
Ungakwazi ukuqeqesha i-10K emavikini amane? Uma ubhalisele umjaho we-10K (amamayela angu-6.2) futhi awukaqali ukuqeqeshwa okwamanje, usengangena esimweni somjaho uma ubeka ingqondo yakho kukho. Ngokusungula uhlu lwezinhlelo ezijikelezayo ngoqeqesho olujwayelekile kanye nezinsuku zokuphumula kungenzeka ukuthi ulungele umjaho emasontweni angama-4.